Kosi yemanheru: Vhiki gumi nembiri
Svondo Yekupinda: Vhiki gumi nemana
Kosi yemasikati: mavhiki masere
* Nguva yemasikati kosi inowanikwa chete paModule 4
BLI's TEFAQ yekugadzirira kosi yakanangana nekubatsira iwe kukudziridza hunyanzvi hwaunoda kuti ubudirire pane ekutaura uye ekuteerera mamodule ebvunzo. Iwe uchashanda mukugadzirisa kugona uye kururamisa, uchiwedzera mazwi ako uye nekuvandudza hunyanzvi hwako hwekuteerera. Panopera kosi iwe unosvika kune iyo CEFR B2 nhanho kana kumusoro
Vese vedu vadzidzisi vane hunyanzvi mukugadzirira kweFAFAQ. Maitiro avo akatobatsira mazana evadzidzi kuzadzisa zvinangwa zvavo munguva pfupi uye kuvandudza kugona kwavo kwekuteerera uye kutaura.
Iyo fosi ine 4 modules iyo ichakubatsira iwe kufambira mberi kubva kune hwakatangira danho kusvika B2 level kana yakakwirira. Pamusoro pezvo, iwe unozodzidziswa kuti uzive chimiro chemhando yebvunzo yeTFAFA.
Module 1: yakakwira gumi neshanu
Module 2: yakakwira gumi neshanu
Module 3: yakakwira gumi neshanu
Module 4: yakakwira gumi neshanu
Kana iwe uchitova neruzivo rweFrance, iwe unotora bvunzo yekuiswa uye uchaiswa mune module inoenderana nezinga rako.
KUCHENESA UYE VHIKI Svondo
Module 1: $ 1950
Module 2: $ 1950
Module 3: $ 1950
Module 4: $ 2450
Ndokumbirawo kuti utibvunze nezve rumwe ruzivo nezve mutengo wedu wekusimudzira wekosi yemasikati
Mabhuku uye Zvemubhadharo Fei
TEFaQ Mibvunzo Yekubvunza (Imwe nguva: pamusoro pekupedzwa kweModule 4)
BLI Quebec Guta kosi ndeye yepamutemo TEFaQ uye TEF bvunzo nzvimbo. Ndokumbira kuti uone kuti mazuva iwayo anogona kuchinja. Kana iwe uchida kutora iyo TEFaQ kana TEF bvunzo, unofanirwa kutevera nhanho kuburikidza nekunyoreswa online kana kutaura nemumiriri weBLI kune rumwe ruzivo.
Mazuva ekuedzwa e2020
Kana iwe uchida pekugara panguva iyo iwe yaunenge uchitora chirongwa chako, zvekugara uye dzimba dzekuteya sarudzo zviripo. Ndokumbirawo mubate bazi redu redzimba.
Imba iri kure nemba Kugara nemhuri yekutambira inzira huru uye yakasarudzika yekuzvinyudza mune tsika nemitauro yeCanada, nekuti inokutendera kurarama chiitiko chemhuri.
Dzedu mhuri dzese dzakasarudzika dzakanyatsosarudzwa uye dzinofanira kusangana neBLI mhando yekuita Isu tinoona kuti dzimba dzose dzemhuri dzinotambira dzinosangana nedziviriro uye hutsanana. Mhuri dzese dzeBLI dzekugara dzinogara mukati mechinhambwe kubva kuchikoro.
Yakazara bhodhi (3 chikafu pazuva)
Hafu bhodhi (zvikafu zviviri pazuva)
Chikamuri cheimba (hapana chikafu pazuva)
Ugaro hwekugara iri sarudzo yevadzidzi vanofarira kusununguka uye yekuvanzika yekugara vega. Iwe uchave neyakavanzika kana yekugovana kamuri, zvinoenderana newako chikumbiro (s). Imba yekubikira uye yekuwachira ichagoverwa nevamwe vadzidzi. Isu pekugara mudzidzi inowanikwa maminetsi gumi kubva kuMontreal campus yedu.
Nyika yeimba yekudhirowa yakavhurwa 24/7
Imba yekuwachira $ $
Kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chisiri chetsika yechinyakare kana ruzivo rwekugara rwevadzidzi, isu tine zvimwe zvakasiyana zvaunogona kusarudza iwe, kusanganisira dzimba dzakashambadzirwa uye studio. Imba yedu yakarongedzerwa inowanikwa maminetsi makumi maviri kubva pane yedu huru kambani.
Minimum 8 vhiki (Hapana yakakwana)
A1 kusvika B2